ဖူးနုသဈ: ဘဝထဲက မှတျတိုငျမြား (၁)
PS က ဆူပါဗိုကျဆာမလေး ကို သတိရပြီးရေးထားတာ မဟုတ်လား မှန်မှန်ဖြေပါ
PS မှာတစ်ခါမှ မဆင်းဖူးဘူး။ (ထူးထူးခြားခြား ပြောရမှာပေါ့။ :D) ထရိန်နင်က BP မှာပါ။
ကိုZT postဖတ်ပြီး ကျောင်းသားဘဝက စားပွဲထိုးခဲ့တာလေးသတိရသွားတယ်။ saturday ,sunday ဆိုရင်လူကျလွန်းလို့ တခါတလေအရှေ့မှာစားပွဲထိုးနေတဲ့မိန်းခလေးတွေထဲကလဲ ကိုယ်တာဝန်ယူထားတဲ့ areaက customerကို အမြန် serve နိုင်အောင်ပန်းကန်ဝင်ဆေးရတာပါပဲ။ (especially sauce cup and glass) အဲဒီတုံးကတော့ဘာဘာညာညာသိပ်မစဉ်းစားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီတုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စားပွဲထိုးခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ။
ကျောင်းတက်တုန်းက sea food ရက်စတောရင့် ၁ ခုမှာ ၁ နှစ်နီးပါး စားပွဲထိုးလုပ်ဖူးတယ်။ပန်းကန်တော့မဆေးရဘူး။ကျန်တာတော့ ကိုzt လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်ပျော်တယ်။တစ်ဆိုင်
လုံး မန်နေဂျာနဲ့စူပါ ကလွဲရင် မြန်မာတွေချည်းပဲ။staff meal ကိုkitchen ထဲက မြန်မာ part time ကျောင်းသားတွေချက်တာမလို့ မြန်မာစာတောင်စားရသေး။
ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်က ကျတော့ အော်ဒါ လက်ခံရတဲ့ဆိုင်ပါ။ ကိုးရီးယား BBQ ဆိုင်မှာလုပ်ဖို့ပဲ လုပ်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က လူတွေက ဘူဖေးဆိုတော့ အရမ်းစည်းပျက်ကမ်းပျက်နဲ့စားလို့ ညစ်ပတ်တယ် သွားမလုပ်နဲ့လို့ အကြံပေးတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဒယ်အိုးနဲ့ ပင်လယ်စာ ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာသွားလုပ်ခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းက အများဆုံးက အဲဒီနှစ်ဆိုင်မှာ မြန်မာကျောင်းသားတွေ အလုပ်လုပ်တာများတယ်။
အော်ဒါမှာတာလက်ခံရတာလည်း မလွယ်ဘူး... menu ကို အလွတ်ရအောင်လုပ်ထားရသလို ဘယ်လို အရသာရှိလည်းမေးရင် မစားဘူးလည်း ဖြေတတ်အောင်လုပ်ထားရတယ်။
အလုပ်ဝင်စမှာ ကြားရက်အလုပ်ပါးမှာပဲဆိုပြီး သွားလုပ်တာ ချစ်သူများနေ့ရဲ့ကြုံတာ ဒုက္ခကိုရောက်ရော။ စားပွဲတွေက နှစ်ယောက်ထိုင် အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့ နံပါတ်တွေပြောင်း၊ လာလိုက်တဲ့ အတွဲတွေ ၀က်ဝက်ကွဲ...
အဲဒီကတည်းက ချစ်သူများနေ့ကို မုန်းခဲ့တာပဲ။ :P
အဲဒီအတွေ့အကြုံမျိုး ခုဆို ရလည်း ရချင်၊ မရလည်း မရချင်ဘူး။
ငယ်တုန်းမှာ အဲလိုအတွေ့အကြုံမျိုး ရခဲ့ဖူးတာ ကောင်းတယ်လို့တော့ ထင်တယ်။
အကုန်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ရရင်တော့ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်...။ ဒါပေမယ့် အချင်းချင်းမတည့်ရင်စိတ်ညစ်စရာ..။ :(
အင်း။ P.Tiနဲ့ JuneOne လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်က ကိုယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆိုင်နဲ့တူများတူနေလားမသိ။ ဗမာများတာရယ်။ seafood ဆိုင်ဖြစ်နေတာကိုပေါင်းပြီး မှန်းကြည့်လိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ outletတော့တူမယ်မထင်ပါ။ မှတ်မှတ်ရရတရက်ကြုံဖူးတယ်။ တဆိုင်လုံးမှာတာဝန်ကျတာအကုန်ဗမာ။ managerရော supervisorတွေရော kitchen staffရော,စားပွဲထိုးတွေရော။ ဗမာမဟုတ်တာဆိုလို့ ပန်းကန်ဆေးတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒီညနေကဗမာလိုပြောပြီး စားပွဲထိုးခဲ့တာ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ်။ Table No ဘယ်လောက်လဲ။ တစ်ဆယ့်တစ်ဆိုပြီး ဗမာလိုအားရပါးရပြောရတာကို အားလုံးကသဘောကျပြီးပျော်နေခဲ့ကြတာ လွမ်းတောင်လွမ်းတယ်။
Fish & Co ?? I also work there before but only forashort while. :D
ha ha...yep yep...It's Fish & Co. I worked there like2andahalf years. I even went back there and worked on weekend sometimes even after I graduate and got the full time job....LOL...
Fish & Co... I worked at at Novena Outlet for about6months. Time flies so fast... about 9-10 years ago. :)
I also worked for Fish&col Suntec Outlet. I love to work there as the Kitchen Cook. Around 2001 I think!
ကပ်စေးကုတ်ပြီး စားသောက်ဆိုင်မသွားချင်တဲ့ ဆင်ခြေ..